AmaTattoos Esandla sikaFatima noma uHamsa: incazelo, izibonelo nokuningi! | Ukudweba imifanekiso emzimbeni
AmaTattoos Esandla sikaFatima noma uHamsa, okusho kanye nohlamvu olungaqondakali
UMaria Jose Roldan | | Izinto nezinto ezidwetshwe emzimbeni, AmaTattoos ezenkolo
Ngenkathi ungene Ukudweba imifanekiso emzimbeni sesivele sikhulume ngezikhathi ezithile mayelana Isandla sikaFatima noma uHamsa, sibone kufanele ukunikela ngendatshana ebanzi kulolu hlobo lwamathambo. I-tattoo, ngakolunye uhlangothi, eye yathola ukuthandwa eminyakeni yamuva ngenxa yezimpawu zayo nencazelo yayo. Masikhumbule ukuthi ama-tattoos wesandla sikaFatima banomlingiswa oyimfihlakalo obenza bathakazelise kangaka. Ingasaphathwa eyokuma kwayo.
AmaTattoos eSandla sikaFatima, uJamsa noma uHamsa (ahunyushwe njengesihlanu ngesi-Arabhu) umele enye yezinto zesiko lamaSulumane elaziwa kakhulu. Njengoba sisho futhi ngenxa yohlamvu lwayo olungaqondakali, kuyisimangalo esihle ngaphakathi kwezwe lamathambo. IHamsa ibilokhu isukela ezikhathini zasendulo ngamasiko amaSulumane ukuzama ukuhlanganisa amazwe aphikisanayo.
1 Umsuka nencazelo yesandla sikaFatima noma uHamsa
2 Ama-hamsa tattoos amahle kakhulu ngombala
3 Futhi ngeminwe isakazekile
5 Uphawu Hamsa isandla Islam
6 Uphawu lwesandla sikaHamsa ebuJudeni
7 IHamsa Hand Symbolism ebuKristwini
8 Ungayitholaphi i-tattoo yesandla seFatima?
9 Izithombe zamaTattoos Esandla sikaFatima (Hamsa)
Umsuka nencazelo yesandla sikaFatima noma uHamsa
Kepha yini i- Umsuka, uphawu kanye nencazelo yesandla sikaFatima noma uHamsa? Njengoba sizobona kamuva, kuwuphawu lwamasiko amaningi ngoba, ngaphezu kwesiko lama-Arabhu, siyakuthola nakumaJuda. Lolu phawu lumelwe yisandla esivulekile lapho iso lingabonakala khona. Ngenkathi isendaweni yezithonya zamaJuda ibizwa ngeHamsa, kwamanye amaSulumane yaziwa ngokuthi "Isandla sikaFatima".
Yize imvelaphi yawo ethile isafihliwe, kuze kube namuhla kusabhekwa imibono eminingi ngomsuka wangempela walolu phawu. Ngakolunye uhlangothi sinosanta ongumvikeli waseCarthage, osetshenziswa amaPhencians njengophawu lukankulunkulukazi wabo uTanit. EMesopotamia (lokho esikwaziyo namuhla njenge-Iraq) yayivele imelwe njenge intelezi yokuvikela ekhuphule nokuzala.
Lapho sethula imidwebo yesandla sikaFatima, siyabona ukuthi uhlala evela ngeminwe emithathu enwetshiwe, kanti kwesinye isikhathi isithupha nomunwe omncane kugobile. Iso langaphakathi elisentendeni yesandla ngu Emelwe ukugwema iso elibi nomona. Ngokusho kwezinye izinganekwane, iHamsa nayo ibimelwe ukuvikela umona, ukubukeka okubi nezifiso ezimbi.
Yize kungabonakala ngathi azihlobene, uma ubhekisisa, uzobona ukuthi ama-tattoo amaningi kaHamsa akhonjiswa eduze kwezinye izinhlanzi, lokhu kungenxa yokuthi kunenkolelo yokuthi izinhlanzi nazo ziluphawu oluvikelayo esweni elibi futhi ziheha okuhle inhlanhla. Kungale ndlela lapho ngokuhlanganisa zombili izinto, kutholakala ukuvikelwa okukhulu esweni elibi.
Ama-hamsa tattoos amahle kakhulu ngombala
Ngokwami, ngithanda la ma-tattoo ngombala. Futhi kungenxa yezimo zayo nemininingwane yesandla sesandla sikaFatima, ungadlala ngemibala enhlobonhlobo ukuthola i-tattoo ephilayo ngempela nokuheha iso. Ngokuya ngezinhlobo zemibala esetshenzisiwe futhi ehlanganisiwe, singathola imiphumela efana naleyo yama-skull tattoos aseMexico.
Futhi kumnyama? Yebo, kumnyama la ma-tattoos nawo abukeka emuhle. Futhi yize ngibathanda ngokwabo ngombala, anginakuphika ukuthi esimweni sabesifazane, uma bezidweba isandla sikaFatima, besenza ngombala omnyama ngohlaka oluhle nolunakekelwayo, umphumela uba umdwebo wobunono obuthile nobuyinkanuko . Futhi ngokwengeziwe kuya ngokuthi i-tattoo uqobo lwayo yenziwa kuphi.
Futhi ngeminwe isakazekile
Isandla se-hamsa singamelwa ngezindlela ezimbili:
Ngeminwe evaliwe ndawonye
Kuthiwa umklamo wokuqala imele amandla okubalekela okubingenkathi eyokugcina iwuphawu lwenhlanhla.
I-hamsa tattoo tattoo ayigcini nje ngokubonga okumangalisayo ngokwakhiwa kwayo nokubukeka kwayo, kepha ibuye isekelwe ngamanani namasiko acebe kakhulu. Uphawu luvela ezinkolweni ezahlukahlukene, kufaka phakathi, njengoba sesishilo, i-Islam, kodwa futhi nasebuJudeni ngisho nakubukristu. Ukusetshenziswa okudala kakhulu kwe-hamsa kubuyela e-Iraq ngaphezu kokusetshenziswa njengesivikelo kanye nokuzivikela esweni elibi, kukholakala ukuthi noma ngubani onayo uphephile nomaphi lapho eya khona. Lesi yisona sizathu sokuqala nesisemqoka esenza abantu abaningi babe nesandla se-hamsa esifakwe elengayo, amasongo, amacici futhi manje nakuma-tattoos, ukuze sihlale sihamba nabo futhi sibavikela nomaphi lapho beya khona.
Ngaphezu kwalokho, isandla se-hamsa naso sigqokiwe noma siphethwe ngoba sisiza ukuhlala siphephile kubantu abathumela amandla amabi ngamehlo abo, ngokwesibonelo, umona noma intukuthelo.
Iso lesandla sehamsa liqinisa ngokwengeziwe uphawu lokuvikelwa kokubi. Iso livame ukubhekisa esweni likaHorus, okusho ukuthi sizohlala sibhekiwe futhi noma ngabe ucashe kuphi, ngoba awusoze wakwazi ukubalekela ukunakwa kwakho.
Kusuka ku-hamsa kwaziwa nangokuthi 'khamsa' okuyigama lesi-Arabhu lelo kusho 'emihlanu' noma 'iminwe emihlanu yesandla'. Kuyathakazelisa ukuthi lolu phawu lwamukelwa kanjani ezinkolweni ezahlukahlukene ngezizathu ezahlukahlukene. Ngokumangazayo, zonke izincazelo nezizathu kubila kumqondo ofanayo nencazelo efanayo: ukuphepha nokuvikelwa kwabanye namandla amabi.
Uphawu Hamsa isandla Islam
Uma ulandela inkolo yamaSulumane, uzokwazi ukuthi iminwe emihlanu ekuyo ingakwazi bamele izinsika ezinhlanu zobuSulumane. Lezi yilezi:
Shahâda-Kukhona uNkulunkulu oyedwa kuphela futhi uMuhammad uyisithunywa sikaNkulunkulu
Salat-Thandaza izikhathi ezi-5 ngosuku
Izipho kwabaswele zakat-da
I-Sawm-ukuzila nokuzithiba ngesikhathi seRamadan
IHajj, evakashela iMecca okungenani kanye ngesikhathi sokuphila kwabo
Ngenye indlela, lolu phawu lwaziwa nangokuthi Isandla sikaFatima, ngenkumbulo yendodakazi kaMuhammad uFatima Zahra.
Uphawu lwesandla sikaHamsa ebuJudeni
Uma uvela emndenini wamaJuda, i-hamsa kukholakala ukuthi ifanekisela ubukhona bukaNkulunkulu kukho konke okukhona kulo mhlaba. Iminwe emihlanu yalolu phawu nayo isetshenziselwa ukukhumbuza ophethe i-tattoo ukuthi asebenzise zonke izinzwa zakhe ezinhlanu ukudumisa uNkulunkulu. Amanye amaJuda akholelwa nokuthi iminwe emihlanu imele izincwadi ezinhlanu zeTorah. Kuyaziwa nangokuthi isandla sikaMiriam, udadewabo kaMose omdala.
IHamsa Hand Symbolism ebuKristwini
Uma kukhulunywa ngobuKristu, eminye imithombo ithi isandla se-hamsa yisandla seNtombikazi uMariya futhi sifanekisela ubufazi, amandla namandla. Izikhathi eziningi, uphawu lwenhlanzi yamaKristu nalo lufakiwe kanye nalo mklamo njengolwelwesi lwangaphandle lweso lenhlanzi (Ichthys). Kubhekwa njengophawu lukaKristu. Kwamanye amasiko, izinhlanzi nazo kukholakala ukuthi azivikelekile esweni elibi.
Akukhathalekile ukuthi unamasiko muni, uyini inkolo yakho noma yiziphi izinkolelo zakho, okubalulekile ukuthi uma uzidweba isandla sehamsa uyazi ukuthi kuwe kusho okuthile nokuthi ngaphandle kokungabaza, uzokugqoka i-tattoo enokuziqhenya okuningi. Inhlanhla, ukuvikelwa, ukuphepha kanye nomndeni yincazelo ebaluleke kakhulu yale tattoo enhle abantu abaningi abayithandayo.
Ungayitholaphi i-tattoo yesandla seFatima?
Ngokuqondene nokuthi yiziphi izindawo zomzimba ezithakazelisa kakhulu ukuthola i-tattoo yesandla sikaFatima noma uHamsaUma sibheka igalari yezithombe ezingezansi, uzobona ukuthi iningi likhetha ukukwenza ngemuva, entanyeni noma kolunye uhlangothi lwesifuba. Yebo, kunabantu abanesibindi sokuyidweba ngezandla zabo, kepha elinye lamasayithi ashiwo ngenhla lingcono.
Kumele sikhumbule ukuthi iyi-tattoo okumele ibe nosayizi ophakathi noma omkhulu ukuze ikwazi ukwazisa yonke imininingwane yayo kalula. Ngaphandle kwalokho, omunye umlingo wayo ulahlekile. Kuyathakazelisa ukukuhlanganisa nezinye izinto? Yebo, ngenkathi kwezinye izimo ngivame ukuncoma ukuhlanganisa ukwakhiwa okuyinhloko nezinye izinto, kulokhu, lawa ma-tattoos alungile yize enziwa wedwa.
Kulungile manje Kumele sikhumbule ukuthi i-tattoo yesandla sikaFatima ingaphezu kwesandla esilula esineminwe emithathu futhi eminye emibili igobile.. Njengoba sishilo kumaphoyinti angaphambilini, ezinye izinhlobo zezinto ezifana neso langaphakathi kufanele zifakwe futhi ezinye izinhlanzi ezincane zizophinda zinikeze ukuthinta okwangempela ku-tattoo yethu. Ngaphandle kokuqhubeka, sikushiya igalari ehlukahlukene yamathambo wesandla sikaFatima ukuze uthole imibono yama-tattoos akho alandelayo.
Izithombe zamaTattoos Esandla sikaFatima (Hamsa)
Ngezansi une-wide Igalari yezithombe yamathambo ngeSandla sikaFatima ukuze uthole imibono yezindawo nezitayela ongazidweba kuzo:
Okwenzelwe ama-newbies amahle kakhulu: ukuthi ungabhalwa kanjani emzimbeni ngezinyathelo ezintathu ezilula
Indlela ephelele ye-athikili: Ukudweba imifanekiso emzimbeni » Izinhlobo zamathambo » Izinto nezinto ezidwetshwe emzimbeni » AmaTattoos Esandla sikaFatima noma uHamsa, okusho kanye nohlamvu olungaqondakali
Melissa rojas kusho
Ngiyayithanda le tattoo. Ngiyayithanda incazelo, futhi kusho nokuthi kimi.
Phendula uMelissa Rojas
Ulwazi lungisize kakhulu futhi futhi kusukela namhlanje sengivele nginakho ebusweni. Ngiyabonga!
Sawubona, ngiyawathanda ama-tattoos, kungabiza malini ngaphezulu noma ngaphansi?
Angazi noma awukakwenzi okwamanje, kepha buza futhi kubiza ngaphezulu noma ngaphansi kwama-dollar angama-60, kepha lokho futhi kuya ngendawo (izwe ovela kulo)
Ngabe kukhona ongangitshela ukuthi isho ukuthini le tattoo kodwa ukuthi iso linezinyembezi
Nginombuzo ongigcwalisa ngibe nelukuluku, ngiseshe okuningi ngale tattoo, kepha ngibheka kuphela imiklamo ehlanganiswe nabesifazane, indoda ingayenza nayo? Ngingathanda ukukwenza, kepha ngizwa ukuthi kungumbhalo wesifazane ...
Nela zavala kusho
I-athikili enhle kakhulu ehlonipha isithombe. Incazelo enhle kakhulu nokuhlaziywa kokufanekiselwa kokufanayo ngokuphelele kanye nezinto ezakha iSandla sikaFatima noma iHamsa nendlela evela ezinkolweni ezahlukahlukene. Ngemuva kokufunda nokuqonda incazelo, manje ngikuthola kujabulisa ukufaka lo tattoo. Ngiyabonga.
Phendula uNela Zavala
I-tattoo enhle kakhulu ngoba umlando wayo unezinto eziningi nezincazelo kumuntu ngamunye ongumnikazi wakhe, ngiyaziqhenya ngokuba nocezu oluhle kangaka
Ama-tattoo abstract: ake umcabango wakho uhambe
Ama-tattoos afihliwe abesifazane: imfihlo oyokwazi wena kuphela